Amiirka Al Shabaab oo digniin adag u jeediyay Ergada | Dhacdo
Home Uncategorized Amiirka Al Shabaab oo digniin adag u jeediyay Ergada
Amiirka Al Shabaab oo digniin adag u jeediyay Ergada
“Waxaan uga digeynaa ummadeena inay ka qayb qaadato doorasho ku sheegga dalka laga hirgelinayo. Waxaan uga digeynaa inay qayb ka noqoto gumeysiga dalka uu ku jiro, garab iyo sharciyad la siiyo, si ajandaha gaalada wadato ee salka ku haya la dirirka Shareecada Islaamka, boobka khayraadka dalka, ciribtirka jihaadka & mujaahidiinta, kala qubqubka bulshada iyo inuu dalka weligiis tabac u ahaado shirqoolada gaalada.” Ayuu yiri Amiirka.
“Mujaahidiintu waxay ka soo horjeedaan qorshe kasta, oo diinteena ka hor imaanaya, dalkeena qaybinayo, dadkeenana kala qubqubaya.” Ayuu yiri Amiirka.
Abuu Cubeyda oo digniin adag u jeedinayay Ergada ayaa yiri “Waxaan digniin iyo dardaaran u direynaa Ergada wax soo xusha, waxaad ogaataan inay nimankan mansab raadiska ah ay idinku dan gaarayaan, gaalnimana ay idin horseedayaan, markay idinku dan gaaraana ay idinka daneysanayaan, amnigiinana ma suggi doonaan, haku kadsoomina ballanqaadyada ay idin fidinayaan, ay ugu horeyso inaad dhaqaale heli doontaan, cidina aysan idin ogaan doonin, codeyntuna ay qarsoodi ahaan doonto.”
Waxa uu intaa ku daray “Waxaad ku tusaale qaadataan masiirka kuwii idinka horeeyay halkuu ku dambeeyay iyo intooda ka nool, hadda nolosha ay ku nool yihiin.”
Previous articleMagaalooyinka Soomaalida oo maanta laga wada ciidaayo